Ady amin’ny pesta : natsinkafon’ny MMM ny fitavozavozan’ny fanjakana | NewsMada
Ady amin’ny pesta : natsinkafon’ny MMM ny fitavozavozan’ny fanjakana
Tsy afaka ny hangina, manoloana izao tranga eto amin’ny firenena izao. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny antoko Malagasy miara-miainga, tamin’ny alalan’ny filohany, Andrianainarivelo Hajo. Nivoitra amin’izany vahaolana ankoatra ny tsikera mivaivay.
« Miteraka korontana ny zava-misy manoloana ny fomba entin’ny fanjakana miady amin’ny pesta. Tsy voafehy ny aretina satria tsapa fa tsy misy fandraisana andraikitra hentitra. Feno fitavozavozana, ary misavoritaka ny fomba fiasan’ny fanjakana manoloana ny fifehezana izany”, hoy ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, afakomaly tao amin’ny tambajotran-tserasera. Nohitsiny fa miteraka olana eo amin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra, ny tompon’ny sekoly, ny fanemorana lava ny fidiran’ny mpanatra sy ny fampiatoana ny fampianarana mandritra ny fotoana lava sy tsy voafetra. Tsy vitan’izany fa miteraka fatiantoka ho an’ireo mpikarakara lanonana sy ireo artista maro, ary ireo mpikarakara fifaninanana ara-panatanjahantena sy mpanao fanatanjahantena izany, araka ny nambarany. « Tahaka izany koa ny lafiny toekarena. Ohatra ny fizahantany, ary manome endrika ratsy ny firenentsika eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena izany”, hoy ihany izy. Nitondra vahaolana koa anefa ny mpanorina ny antoko, toy ny nataon’izy ireo tamin’ny alalan’ny olom-boafidiny eny amin’ny kaominina Masindray, Avaradrano. Anisan’ny mampiavaka ny Malagasy miara-miainga rahateo ny fanomezana hasina ny fitsinjaram-pahefana tena izy, miainga eny ifotony. “Nametra ny fivezivezena sy nanakatona ireo sekoly, birao rehetra, ary ny toerana rehetra fivezivezen’ny olona nandritra ny telo andro ny mpitantana. Namafy fanafody sy nitsirika eran’ny fokontany rehetra izy ireo…”, hoy ihany izy.
Fepetra matotra sy henjana
Tahaka izany koa ny tolokevitry ny Malagasy miara-miainga ka tokony handray andraikitra ao anatin’izany rehetra izany ireo mpitantana eny ifotony : ny ben’ny Tanàna, ny sefo fokontany, ny mpiasan’ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana, ny mpanabe… “ Mamantatra sy mijery ireo toerana, na trano, misy tranga mampiahiahy ka, mametra ny fivezivezena amin’ireo toerana ireo. Miantso ireo tompon’andraikitra handray ny fepetra momba ny fitsaboana ireo marary na ahina marary sy ny fiarovana ireo olona mifanerasera amin’izy ireo”, hoy izy. Mazava ny hafatry ny Malagasy miara-miainga fa vahaolana haingana entina mahafantatra sy mifehy ireo toerana misy ny valanaretina ka hifehezana ny fiparitahany ireo fepetra matotra sy henjana ireo. “Vahaolana amin’izao tsy fandehanan’ny fiainam-pirenena amin’ny tokony ho izy izao ny fiarahana miainga amin’ny alalan’ny fiaraha-mientana eny anivon’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana, anisan’ny endrika fitsinjaram-pahefana tena izy”, hoy Andrianainarivelo Hajo.